Kungani ukubuya kweNkosi ezinsukwini zokugcina kungabandakanyi ukubonakala kumuntu nokwenza umsebenzi Wakhe emzimbeni womoya? | IBandla LikaNkulunkulu USomandla
UNkulunkulu wezinsuku zokugcina usebenzisa izwi ukuphelelisa umuntu. Akasebenzisi izimpawu nezimangaliso ukucindezela abantu, noma ukubathonya; lokhu ngeke kucacise amandla kaNkulunkulu. Uma uNkulunkulu ekhombisa izizimpawu nezimangaliso kuphela, kusho ukuthi kuzoba nzima ukucacisa iqiniso likaNkulunkulu, ngakho-ke kube nzima ukuphelelisa umuntu. UNkulunkulu akamphelelisi ngezimpawu nangezimangaliso umuntu, kodwa usebenzisa izwi ukunisela nokwelusa umuntu, ngemva kwalokho abantu bakwazi ukulalela nokwazi uNkulunkulu. Lena yinhloso yomsebenzi awenzayo namazwi awakhulumayo. UNkulunkulu akasebenzisi indlela yokukhombisa izimpawu nezimangaliso ukuphelelisa umuntu—usebenzisa amazwi, futhi usebenzisa izindlela eziningi ezehlukene zokusebenza ukuphelelisa umuntu. Noma ngabe ukucwengwa, ukusebenzelana, ukuthenwa, noma ukunikezwa amazwi, uNkulunkulu ukhuluma ngezindlela eziningi ukuze aphelelise umuntu, futhi anike umuntu ulwazi olukhulu ngomsebenzi, ubuhlakani nokumangalisa kukaNkulunkulu. Uma umuntu epheleliswa ngesikhathi uNkulunkulu azoqeda ngaso leyo nkathi ezinsukwini zokugcina, uzofanela ukubona izimpawu nezimangaliso. Uma unolwazi lukaNkulunkulu futhi ukwazi ukulalela uNkulunkulu noma ngabe wenzani, uzobona izimpawu nezimangaliso, ngoba uzobe ungenamicabango ngeqiniso likaNkulunkulu. Okwamanje, ukhohlakele futhi awukwazi ukuthobela uNkulunkulu ngokuphelele—ingabe ufanelekile ukubona izimpawu nezimangaliso? Isikhathi uNkulunkulu azobonisa ngaso izimpawu nezimangaliso kulapho uNkulunkulu esola khona umuntu, uma kuguquka inkathi, futhi, phezu kwalokho, uma kuphela inkathi. Uma umsebenzi kaNkulunkulu wenziwa ngokujwayelekile, akavezi izimpawu nezimangaliso. Ukuveza izimpawu nezimangaliso kulula kakhulu, kodwa lowo akuwona umgomo womsebenzi kaNkulunkulu, futhi akuyona inhloso yohlelo lukaNkulunkulu lokuphatha umuntu. Ukuba umuntu wabona izimpawu nezimangaliso, futhi uma umzimba kamoya kaNkulunkulu ubungabonakala kubantu, ingabe bonke abantu bebengeke bakholwe kuNkulunkulu? Ngike ngasho phambilini ukuthi iqembu labanqobi lizuzwe eMpumalanga, abanqobi abaphuma ekuhluphekeni okukhulu. Asho ukuthini lawa mazwi? Asho ukuthi laba bantu abazuziwe bahlonipha ngeqiniso ngemva kokwahlulelwa nokusolwa, ukusetshenzwa nokuthenwa, nazo zonke izinhlobo zokucwenga. Ukukholwa kwabantu abanjalo akufiphele futhi akukhona okucatshangwayo nje, kodwa kuyiqiniso. Ababonanga zimpawu nezimangaliso, noma naziphi izimanga; abakhulumi ngezincwadi ezinzima nezimfundiso, noma ngemibono ejulile; kunalokho baneqiniso, namazwi kaNkulunkulu, nolwazi lweqiniso likaNkulunkulu. Ingabe iqembu elinjengaleli akufanele liwenze acace amandla kaNkulunkulu?
Ngiyanitshela, labo abakholwa kuNkulunkulu ngenxa yezibonakaliso, impela bayisigaba esiyozwa ukubhujiswa. Labo abangakwazi ukwamukela amazwi kaJesu osebuyile enyameni, impela bayinzalo yesihogo, isizukulwane sengelosi enkulu, isigaba esizoya ekubhujisweni okuphakade. Abantu abaningi kungenzeka bangakunaki engikushoyo, kodwa ngisafuna ukutshela bonke ababizwa ngabangcwele abalandela uJesu ukuthi, lapho nibona uJesu ehla ezulwini ngefu elimhlophe ngamehlo enu, lokhu kuyoba ukubonakala emphakathini kweLanga lokulunga. Kungenzeka, leso kuyoba isikhathi sokujabula kini, nokho kumele nazi ukuthi ngesikhathi nibona uJesu ehla ezulwini, kuyoba futhi isikhathi sokuthi niye phansi esihogweni niyojeziswa. Kuyoba sekuphela isikhathi sohlelo lokuphatha lukaNkulunkulu, futhi kuyoba isikhathi lapho uNkulunkulu eyovuza abahle bese ejezisa ababi. Ngokuba ukwahlulela kukaNkulunkulu kuyophela ngaphambi kokuba umuntu abone izibonakaliso, lapho kukhona ukuvezwa kweqiniso kuphela. Labo abemukela iqiniso, bengabheki izibonakaliso, futhi sebehlanziwe, bayobe sebebuyela phambi kwesihlalo sikaNkulunkulu futhi sebengene ekugonweni nguMdali. Labo kuphela abaphokophelela enkolweni ethi “uJesu ongagibeli efwini elimhlophe unguKristu wamanga” bayothola ukujeziswa okuphakade, ngokuba bakholwa kuphela kuJesu obonisa izibonakaliso, kodwa abamazisi uJesu omemezela ngokwahlulelwa okunzima bese ekhipha indlela yeqiniso yokuphila. Futhi kungaba kuphela ukuthi uJesu ubhekana nabo uma ebuya ngokusobala ngefu elimhlophe.
Okwedlule：Kungani ukubuya kweNkosi kubandakanya ukuba Kwayo yinyama njengeNdodana yomuntu ukuze izembule ngokwayo esintwini?